Waxyaabaha ay tahay inaad tixgeliso markaad bilaabayso kanaalka YouTube ee bilowgaaga - YTpals
Waxyaabaha ay tahay inaad tixgeliso markaad bilaabayso kanaalka YouTube ee bilowgaaga
Waa xaqiiqo la wada ogsoon yahay in YouTube-ku yahay mid ka mid ah aaladaha inta badan loo isticmaalo daawashada muuqaalka. Madashu si xawli ah ayay u koraysay dhawrkii sano ee la soo dhaafay. Halka sanadkii 2017, YouTube ay lahayd ku dhawaad ​​1.86 bilyan isticmaaleyaal firfircoon adduunka oo dhan, tiradani way dhaaftay 2.3 bilyan ee 2020. Tirakoobyadani waxay muujinayaan in YouTube ay siiso meel faa'iido badan ganacsiyada cusub si ay u bilaabaan koritaankooda. Fursadda ay YouTube siisay dadka bilaabaya waa badan tahay. Waxaad soo dhejin kartaa xayeysiisyo si aad u soo jiidato macaamiisha ama aad u abuurto casharro iyo sida loo sameeyo fiidiyowyada alaabtaada ama adeegyadaada. Waxa kale oo aad u isticmaali kartaa YouTube si aad u siiso daawadayaasha muuqaalada danbe eega ganacsigaaga.
Haddii aad ku fikirayso inaad u furto kanaalka YouTube ee ganacsigaaga, waxaad timid meeshii saxda ahayd. Maqaalkani wuxuu dabooli doonaa aasaaska bilaabista kanaalka YouTube. Intaa ka dib, waxaan ku siin doonaa talooyin ku saabsan isticmaalka YouTube si ay u caawiyaan koritaanka ganacsigaaga.
Sida loo sameeyo kanaalka YouTube ee bilowga
Kuwa soo socda waa hage-tallaabo-tallaabo loogu abuurayo kanaalka YouTube ee ganacsigaaga -
1 StepSoo gal YouTube adigoo isticmaalaya koontada Google ee ganacsigaaga ama mid cusub samee. Koontadan waa in si gaar ah loogu talagalay ganacsigaaga.
2 StepLaga bilaabo bogga guriga ee YouTube, waxaad ka samayn kartaa magaca kanaalka YouTube ee bilowga ah.
3 Step: Waxaad buuxin kartaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan akoonkaaga ganacsiga.
4 StepSamee astaanta kanaalka oo ku dar farshaxanimada sida ugu fiican u matalaysa ganacsigaaga.
5 Step: Buuxi sharraxaadda kanaalkaaga YouTube.
6 StepDeji hawsha iyo kanaalada caanka ah.
7 StepSoo rar nuxurka.
Waxyaabaha muhiimka ah ee la tixgeliyo
In kastoo abuurista kanaalka YouTube ee ganacsigaaga ay tahay hab fudud oo 7-tallaabo ah, waxaa jira waxyaabo ay tahay inaad tixgeliso marka aad abuurayso kanaalkaaga YouTube.
1. Go'aami hadafkaaga YouTube
Bilaw ahaan, aad YouTube channel Waxay u adeegi doontaa ujeedo ka duwan kanaalada kale ee YouTube. Waa lama huraan in la go'aamiyo yoolalka kanaalka YouTube bilowga bilowga. Fikrad ahaan, yoolalyadu waa inay noqdaan kuwo u horseedaya ganacsigaaga iyo beddelidda hoggaannada si dakhli badan loo soo saaro. Waxaad kobcin kartaa hogaanka laga helay YouTube si aad ugu darto liiska emailkaaga. Liiska iimaylkan ayaa markaa diri kara heshiisyo, dhisi kara xidhiidh, oo wadaagi kara wararka la xidhiidha warshadaha.
2. U samee miisaaniyad kanaalkaaga YouTube
Kadib markaad go'aamiso yoolkaaga, waa muhiim inaad u abuurto miisaaniyad kanaalka. Tani waxay u baahan tahay inay daboosho qalabka laguu isticmaali doono si aad u abuurto fiidiyowyada iyo haddii aad u baahan doonto caawimo si aad u socodsiiso kanaalka. Miisaaniyadaada waxaa lagu go'aamin doonaa nooca iyo tayada nuxurka aad rabto inaad soo saarto. Haddii aad rabto fiidiyowyo tayo sare leh oo leh qiimo wax soo saar weyn, miisaaniyada kanaalkaaga YouTube ayaa si dabiici ah u kordhi doona. Tani waa sababta oo ah waxaad u qoondayn doontaa qayb ka mid ah miisaaniyaddaada kooxda sawir-qaadayaasha iyo tifaftirayaasha aad shaqaaleysiin doonto, marka laga reebo qalabka aad soo iibsatay.
3. Fiidiyowyo u samee dufcaddo
Si aad u ilaaliso joogtaynta kanaalkaaga cusub ee YouTube, waxa fiican inaad wakhti hore sii qorsheysato. Kahor intaadan fiidyahaga ugu horreeya soo dhejin kanaalka, waxay ahaan lahayd fikrad wanaagsan in ilaa sagaal fiidiyow oo kale la diyaariyo. Markaad diyaariso nuxurka 10 qaybood, waxay kuu ogolaaneysaa inaad si hufan u shaqeyso waxayna sidoo kale ku siineysaa waqti aad diirada saarto dhinacyo kale. Markaad ka shaqeyso fiidiyowyadaada dufcad, waxay ka dhigi doontaa safarkaaga YouTube inuu u ekaado mid dhib yar.
Abuuritaanka kanaal cusub oo YouTube ah ee ganacsigaagu wuxuu u ekaan karaa mid adag marka hore, laakiin dadaallada joogtada ah ayaa hubaal ah inay keeni doonaan natiijooyinka. Helitaanka ka-qaybgalka loo baahan yahay ee daawadayaasha waxay inta badan caddaynaysaa inay ku adag tahay kanaalada cusub. Si aad dareen wanaagsan uga hesho daawadayaasha, waxaa lama huraan ah in la horumariyo cabbirka kanaalkaaga. Tani waa halka ay jecel yihiin bixiyeyaasha adeegga lagu kalsoon yahay YTpals ku caawin kara Waxaan haynaa adeegyo kala duwan oo YouTube ah oo ka caawin kara kobcinta kanaalkaaga. Waad awoodaa iibso saacadaha daawashada YouTube, aragtiyo, jecel yahay, iyo xataa macaamiishu YT Pals, kuwaas oo gacan ka geysanaya ka dhigista algorithmamka YouTube inuu ku shaqeeyo adiga. YTpals waxay bixisaa 100% dammaanad badbaado adeeg kasta. Adeeggu wuxuu inta badan bilaabmaa 24 ilaa 72 saacadood ka dib marka la dalbado. Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan adeegyadayada, waxaad la xiriiri kartaa adeegga macaamiisha maanta!
Waxyaabaha ay tahay inaad tixgeliso markaad bilaabayso kanaalka YouTube ee bilowgaaga waxaa qoray YTpals Writers, 27 December 2021